daytoy_yoko97's Reading List - daytoy_yoko - Wattpad
daytoy_yoko97's Reading List
#hunhan #chenmin #taoris #kaisoo #sulay
56.3K 4.5K 11
❤️ကိုကို့ပိစိလေး❤️ ( Zawgi +Unicode )(complete)
226K 18.3K 32
Crush's friend.( Completed )
477K 27.4K 25
Wang Yi Bo Xiao Zhan Fanfiction 🥰🔞
92.4K 4.7K 9
" ကိုကို ကယ်တင်ပါ " ( 哥哥 救救我 )
117K 12.7K 11
The relationship betweenababyish boy ( Wang Yi Bo ) andanonchalant boy ( Xiao Zhan ). I hope you'll enjoy to read this! Thank you.
21.2K 1.2K 13
အချစ်​မှ လွဲ၍ ..။ [One Shot]
1K 111 1
သက်​ဆိုင်​ရာ ဤနှလုံးသားဧရိယာအတွင်း.. အချစ်​မှလွဲ၍ မည်​သူကိုမျှ ​အ​ရေးတယူရှိမည်​မဟုတ်​.. ။
☁ခဈြသူရေးတဲ့ တိမျပနျးခြီ☁ ☁ချစ်သူရေးတဲ့ တိမ်ပန်းချီ☁
6.1K 659 11
" မငျးပွတဲ့ တိမျပနျးခြီလေးတှကေ လှတော့လှတယျ ဟနျ! ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါခဏတာပဲ! အစဈအမှနျမဟုတျဘူး " Hun 💙 Han BL fiction " မင်းပြတဲ့ တိမ်ပန်းချီလေးတွေက လှတော့လှတယ် ဟန်! ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါခဏတာပဲ! အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး " Hun 💙 Han BL fiction
အဆုံးသတ်​မရှိတဲ့ ချစ်​ခြင်းတစ်​စုံတစ်​ရာ ...
407 32 1
2019 V day အမှတ်​တရ Believe Forever HunHan
214 14 1
#HunHan(One Shot) #present for PCYTon
Look at me! ( Myanmar version ) Completed
9.7K 1.1K 21
after 1 month of chasing 20 confessions Oh Sehun finally said yes to Luhan but then Luhan realise that Sehun has set his eyes on someone else------ (Zawgyi + Unicode)
11.2K 635 205
cover credits: kkaebbsongg
638K 36.9K 71
အချစ်ကို ကိုးကွယ်သောလူသားတစ်ယောက်နဲ့ အချစ်မခံချင်သောစိတ်ကူးယဉ်မဆန်သောလူသားတစ်ယောက် အချစ် မှာဘယ်သူက ကျရှုံးမလဲ #bl
101K 6.9K 36
HunHan ( normal ) ဘဝမှာ နာကျည်းချက်နဲ့အတူ ပုံစံတကျ ရှင်သန်လာခဲ့တဲ့ tomboy လေး *xiao luhan* ရုပ်ရည် အောင်မြင်ချမ်းသာမှူ့တွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် *oh sehun * သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ နှလုံးသားမှာ အချစ်တွေ စတင်နေရာယူလာချိန်မှာတော့ ပြောင်းလဲမှု့များစွာက ♡ ♡ Hunhan♡ ♡ ♡...
3.1K 221 2
9.5K 936 5
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ..သူ့အချစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံဖို့ ရှက်နေတယ်ဆိုရင်...ကမ္ဘာကြီးမှာ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဖူးလေ..
617 49 1
မပြီးဆုံးသေးသောတချို့ဇာတ်လမ်းတွေ... One Shot
My Polaris//Completed //
80.8K 7.7K 30
ကမ္ဘာပေါ်ကအရာအားလုံးကို ကိုကိုသိစရာမလိုပါဘူး ကိုကိုကကျနော့်အချစ်တစ်ခုတည်းကိုပဲသိပေးရင်ရပြီ
A LOVE THAT WE NEVER NOTICED
97.8K 6.2K 22
စီးပွားရေးကိုသာနားလည်ပြီး အချစ်ကိုဘာမှန်းမသိတဲ့Luhanဆိုတဲ့ကောင်လေးရယ် ဆရာဝန်လေးSehunရယ် နားလည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်မိသောအခါ...
10K 750 6
ချစ်​သူရဲ့ သစ္စာ​ဖောက်​ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာ​ကြောင့်​ အချစ်​ဆိုတဲ့အရာကို အယုံအကြည်​မရှိပဲ သူ့ဘ၀ကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်​သန်း​နေထိုင်​​နေတဲ့ ​​ကျောင်းဆရာတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့ Sehun ဟာ.... အမူအကျင့်​ တစ်​မျိုးစီကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြတဲ့ ဂိုဏ်းစတား အစ်​ကိုသုံး​ယောက်​ ရဲ့ ညီဖြစ်​သူ Luhan ဆိုတဲ့​ကျောင်းသား ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက...
သခငျ့အမုနျး ဆိပျသုဉျးပါစေ (Zawgyi / Unicode version )
9.8K 723 5
ကွကှေဲစိတျကွောငျ့ တိတျတဆိတျမကျြရညျ မကွှရေအောငျ သခငျဆို့ပိတျထား အမုနျးတခါးကို ပကျြပွားစရေေး ခြိုးဖကျြပေးပါ ။(Hunhan)
SWEET LISE (Complete)
45.6K 2K 19
Mo Dao Zu Shi Short Stories
738K 58.1K 29
❌ Major Spoilers Ahead❌ All OTPs in Mo Dao Zu Shi.
13.8K 946 1
ဆယျ့သုံးနှဈတာ စောငျ့ဆိုငျးမှု...ဆယျ့သုံးနှဈတာ ငါတို့ရဲ့ အမှတျတရတှေ... မငျးကို ရညျညှနျးတဲ့ ငါ့ရဲ့ စာလှာလေးတှေ... Original - Until we meet again by @_13th translation by Natpankalay အဓိပ်ပာယျမှားယှငျးမှု မပွညျ့စုံမှု တဈစုံတဈရာရှိခဲ့ပါသျော ပွနျဆိုသူ၏ အမှားသာဖွဈပါသညျ။ #Zawgyi & unicode
Platonically Romantically (mo dao zu shi fanfiction)
35.4K 2.2K 6
Er ge never ever believes me..it hurts 💔 pairing - lanxichen x jin guangyao
𝐌𝐨 𝐃𝐚𝐨 𝐙𝐮 𝐒𝐡𝐢 [𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 & 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬] ♥𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄𝐃♥
630K 54.5K 49
🖤 Remarkable, Memorable, Valuable, Miraculous Fable 🖤 Just my deeply beloved collections! ~ Sharing and Reposting is strictly forbidden ~ Plz don't, babies. please ~ All of the pictures used in this are respectfully credited to Creators.
Study Guide Hun And Baby Han
21.9K 1.7K 12
Hunhan Yaoi Fan Fic
Kengkla - the wolf in the closet
69.3K 2.3K 9
How Kengkla the spoiled brat falls in love. The title is based on his character arc in the book (which I haven't read but have just heardalittle bit about.) I really like MarkGun rapport off-screen and then this is what it resulted in.
What I hate about Him (A Love by Chance story)
138K 6.3K 28
When your favorite cp doesn't have enough screen time and fanfiction you've to do the damn thing on your own. This isaLove By Chance high school AU centering cold Kengkla who almost hate everything and everyone, trying to fit in with the well known crazy football team lead by the clumsy oaf goes by the name of Techn...
91.3K 9.3K 16